Ikhaya elimangalisayo eSierakow elinamagumbi okulala ama-3, indawo yokuqubha yangaphandle kunye neWiFi
UNovasol unezimvo eziyi-110 zezinye iindawo.
Eli khaya leeholide lisembindini wehlathi leNotecka eSieraków phakathi kweGorzów Wielkopolski kunye nePoznań.
Ikhaya eligcinwe kakuhle kwaye limnandi leholide kwipropathi enkulu ekwabelwana ngayo. Ingaphakathi lendlu likhululekile kwaye liyasebenza kwaye lilungele kakhulu iintsapho ezinabantwana. Le ndlu inamagumbi okulala amabini, i-mezzanine, igumbi lokuhlala elinekhitshi kunye negumbi lokuhlambela.
I-Lichwińskie Lake enolwandle kunye nezinto ezinomtsalane kwimidlalo yasemanzini ikumgama nje oyi-1 km. Indawo ibonelela ngeendlela ezintle zokuhamba, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokukhwela kanye ngasekhaya. Abanini banikezela ngezifundo zokukhwela kwizitali zabo kunye nezitya zasekhaya ezenziwe kwiimveliso zendalo kunye neemveliso zengingqi ezifana newayini, itshizi kunye nobusi. Apha uya kuphila kuxinzelelo lwemihla ngemihla.
Indawo ilungele abaloli njengoko indawo inamachibi amaninzi apho unokuloba khona i-carp, i-pikeperch, i-pike okanye i-eel unyaka wonke. Amahlathi amangalisayo kunye kufuphi nehlathi laseNadnotecka eligcwele amakhowa kunye namajikijolo yiparadesi yabakha amakhowa. Kuyenzeka ukuqesha iphenyane elibhexwayo kunye nephenyane. Umnini-shishini angakunceda ukuba ulungiselele iimpepha-mvume zokuloba.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-110 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 5 m / ithuba lokuloba 1 km / ivenkile 600 m / Amanye amanzi okanye indawo yokuqubha.(Ichibi) 1 km / indawo yokutyela 1.5 km / idolophu ekufutshane(Sieraków) 2 km / amanzi(Sandy beach) 1 km